Myanmar’s Got Talent by popolay.com
Afteravery successful launched in more than 58 countries around the world, Got Talent has arrived Myanmar. This talent show format program has been ranked the best game show in every country it debuted, and, withoutadoubt, it will become the number one TV
16 ก.ย. 2562 | 21,100 Views
12 Sep 2019 | 21,656 views Myanmar’s Got Talent 2019 ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲက အသက် ၅ နှစ်အရွယ် မြန်မာ့သိုင်းပညာရှင်လေး “ဘုန်းမြတ်မင်း” က မြန်မာဆိုတာကို ကမ္ဘာက သိအောင်၊ လေးစားအောင် သူကျွမ်းကျင်တဲ့ မြန်မာ့သိုင်းစွမ်းရည်နဲ့အတူ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ တာဝန်ကျေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။
09 Sep 2019 | 20,815 views Rock ဘိုးအေကြီး ဦးညီထွဋ် က စင်ပေါ်မှာ သီချင်းဆိုရင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဟိုဘက် သည်ဘက်ပြေးကာ ပရိသတ်တွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဖျော်ဖြေတတ်တာ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Myanmar’s Got Talent ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာ ဦးညီထွဋ် ကို အရမ်းကြွေနေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ရှိပါတ
02 Sep 2019 | 20,705 views ဒီနှစ် Myanmar’s Got Talent ယှဉ်ပြိုင်မှု တစ်ခုလုံးမှာ မနေ့ညက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်လ်က အခုချိန်ထိတော့ ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံး Episode ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညက ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးဟာ Grand Final နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့သူတွေချည်းဖြစ်လို့ ဒိုင
ဒိုင်လူကြီးတွေကို လိပ်ပြာလွင့်သွားစေတဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက် (ရုပ်သံ)
26 Aug 2019 | 1,690 views မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Myanmar’s Got Talent ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင် ‘Damien’ ပြသခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက်ဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဒိုင်လူကြီးတွေအားလုံးကို အံသြမှင်သက်မိသွားစေခဲ့ပါတယ်။
19 Aug 2019 | 1,661 views စကားကို မပီကလာ ပီကလာသာ ပြောတတ်သေးပေမယ့် သိုင်းပညာမှာတော့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အသက် (၅)နှစ်အရွယ် ‘ဘုန်းမြန်မင်း’ က Myanmar’s Got Talent ရဲ့ Semi Final မှာ ဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကို လက်ဖျားခါလောက်အောင် မြန်မာ့သိုင်းကို အစွမ်ြး
05 Feb 2021 | 21,206 Views
05 Feb 2021 | 21,253 Views
05 Feb 2021 | 21,119 Views
05 Feb 2021 | 20,825 Views
26 Jan 2021 | 21,239 Views
29 Jul 2019 | 1,553 views မနေ့ညက MRTV4ရုပ်သံကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Myanmar’s Got Talent အစီစဉ်မှာ “သားတို့အမွှာ မိုး ဖြိုး” ဆိုတဲ့ အမွှာကလေး နှစ်ယောက်က မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို တစ်ကွက်ထဲနဲ့ သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
22 Jul 2019 | 1,900 views လူတိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘတွေရဲ့ အဝေးမှာ ခွဲခွာနေဖူးကြမှာပါ။ အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန် မိဘ(အထူးသဖြင့်) အမေ့ကို သတိရတဲ့ ခံစားချက်က ခဏတဖြုတ်ခွဲဖူးတဲ့သူတွေအတွက် မသိသာပေမယ့် အချိန်ကာလကြာရှည်စွာ ခွဲခွာနေကြရတဲ့ သားသမီးတွေကတော့ ဘယ်လောက်တောင် ကြေကွဲရလဲဆိ
15 Jul 2019 | 1,503 views
15 Jul 2019 | 1,642 views Myanmar’s Got Talent ရဲ့ အပတ်စဉ်တိုင်းမှာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဒိုင်လူကြီးတွေ မှင်သက်မိအောင် စွမ်းရည်ပြသနိုင်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ မနေ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် “ဂျင်ဆရာ” က နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ချာချာလည်နေတဲ့ ဂျင် ကို အေးအေးဆေးဆေး ထိန်းကွပ
မျက်လှည့်ဆိုရင် ရိုးနေပါပြီဆိုတဲ့ ဒိုင်တွေကို အံ့သြသွားစေတဲ့ “V-Scorpions”
08 Jul 2019 | 1,674 views တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် ထူးခြားတဲ့ မြန်မာလူစွမ်းကောင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့ Myanmar’s Got Talent အစီစဉ်မှာ မနေ့ညက ပြိုင်ပွဲဝင် “Scorpion” ရဲ့ ပြကွက်က ပရိသတ်တွေနဲ့ ဒိုင်တွေကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ข่าวทั้งหมด 137 ข่าว 12 หน้า